Aza variana manenjika aloka – MyDago.com aime Madagascar
Aza variana manenjika aloka
Te-hampihatra ny lalàna velona eto amin’ny tany sy ny fanjakana ny mpitondra manana ny fahefana ankehitriny, saingy sarotra ny fampiharana izay firain’ny vavany rehefa tonga eny amin’ny tokony
hizorany ny fanampahan-kevitra. Izay rehetra atao tokoa tsinona toa hananan-doza avokoa, izay nofaritana mialoha toa mihemo-dava tsy hita fiafaràna, izay mba tetik’asa vinavinaina tsy misy
tanteraka fa very an-javony. Ilay fanantenana tamin’ny fankatoavan’ireo sehatra iraisam- pirenena dia mbola any an-kibon’ny omby satria novolena tambiny ho amin’ny fahavitan’ny fifidianana
izany… Ny nambolena tsy naniry e ! Ny nasosoka maty maso ! Ny nantenain-kanirina no nampivandravandra. Mitogaigy sy midongizina fotsiny re ! Miraviravy tanana daholo, na kely na lehibe…Kanefa
tsy misy miala izany eo ry akama, fa samy tary amin’ny tanàna e ! Tsy misy sahy milaza fa hiala kanefa mipoapoaka ny fandraisana anjara amin’ny fifidianan ho avy. Raha ny ozona sy ny ompa tokoa
no mampadio sy mety hahombiazan’ireo manao azy dia efa lasa lavitra isika sy ity tetezamita ity. Nolazaina daholo izay ratsy rehetra mety ho nataon’ilay teo aloha : mpanompo sampy e ! niompy saka
mainty sy osilahy maintibe,hono, ts’inona k’ah ! Mpanao varo-maizina sy mpangorona ny harem-pirenena e ! tratra tao amin’ny orinasany daholo,hono, ts’inona ny « andramena » tsy hita pesipesenina
k’ah ! Mpanararaotra sy mpanivaiva olona ka mihevi-tena ho tsy refesi-mandidy sy mesia e ! Nibodo tanin’olona marobe, hono, e ! Nividy haitraitra tsy misy dikany tamin’ny volam-panjakana
koa,hono, e ! Amin’izao fotoana indray dia aely sy habobobobo faran’izay matanjakan ny filazana fa Ravalomanana Marc ihany no Ravalomanana Lalao. Rehefa mandre ireny honohonom-bahoaka sy teniteny
tsy hita fototra marobe ireny dia tena mihamaimbo sy tsy misy ilàna azy intsony ny olona voatondrotondro amin’ireny.I zany no fanapotehana sy fanampempoana izany dia tetika politika hanimbana ny
mety ho mpifaninana amin’ireo mpifanandrina isanisany.
5 pensées sur “Aza variana manenjika aloka”
Marina dia marina mihintsy izany ry akama !
Ireo rehetra izay nivoy ny fanosoram-potaka dia efa nisitrika tsy sahy miseho masoandro intsony izao, na ao anatin’ny fianakaviana aza !
Fa mba rahoviana ny vahoaka malagasy no tena hitsangana amin’izay ê ? Eny ! Ekena fa nisy ny fandrahonana tamin’ny 2009 ka atramin’izao, fa dia ho tahak’izao foana ve ny fiainam-bahoaka ? Tsy rariny mihintsy, ary ho tompon’andraikitra amin’izany daholo !
Saro-piaro mafy amin’ity hoe Fihavanana ramalagasy dia izao no vokany !
Miafina ao ambadik’io Fihavanana, Fihavanana lava io foana, satria tsy sahy milaza sy mitaky ny marina !
Tsy ho ela dia ho lasa hoe » Aoka isika ho very tsikalakalam-piandranampirenena sy fahaleovantena, toa izay very tsikalakalam-pihavanana » !
Hoy ny jiolahim-boto : « Tiavo ny namanao mba ihinananao ny pipi-nao » !
Hoy ny mpiaro ny ara-dalàna : « Tiavo ny mpanongam-panjakàna, mba andehanan-tsika mianakavy ho any amin’ny elo sy afo-be » !
Ny fomba entina i-encourager_na ny movansa Ravalomanana tsy hanaiky ny toromariky ny SADC no tokony imasoantsika rehetra izao.
Ny fidinana an-dalambe mampiseho ny fanohanana ny filatsahan’i Lalao Ravalomanana no atao makotroka be eran’i Madagasikara.
Vonona amin’izany ve isika rehetra?Miandry inona loatra ireto Malagasy vao hihetsika? Efa lazaina foana fa rehefa mandalo eto an-tanàna ny iraky ny SADC dia tokony mampiseho ny heriny ny vahaoka (indrindra fa ny movansy Ravalomanana) fa dia asa loatra!!!
Mankahery ny tia tanindrazana rehetra hifandray tànana fa mbola hiha-mafy ny tolona.
11 mai 2013 à 16 h 34 min
Atoa RAVALOMANANA Marc sy R’i Mamy ary R’i Hanitra no niantso ny legalista hatoky ny sadec .
rehefa nitohy ny tetezamita izay nitarin’i Rajoelina sy Ny Frantsay dia nihena Ny Influence ‘i Atoa Ravalomanana tao @ Sadec sy Ny Ue satria ny frantsay dia nanao izay nisisiana tao @io fikambanana tsy francophone io ary dia viatany tokoa izany .
KA RAHA IZAO NO MITOHY ,IZANY HOE NY RAHA vitan iRajoelina sy ny frantsay ny mampitarazoka kely ity tetezamita @ endriny @ izao fotoana izao ,dia ho levona tanterka ity mouvansy Ravalomanana ity.
KOA IZANY NY MIANDRY ANTSIKA .KA NA HATAO AZA NY HINO ,DIA HAZO HATAO NY MINO NY FAHALEVONANA raha izao no mitohy.
12 mai 2013 à 3 h 42 min
Tsy nihevi-tena ho mesia izy: fa ny olona fa indrindra ireo zokinjokiny mahafantatra sy niaina tao anaty JOUG de l’Amiral Rouge + fanodikodinam-bato (nandritra ny taona marobe)
no nametraka azy latsa-paka tao @ fanahy, toa ny mariky ny fanafahana: fa saika firenena tsy afa-mihetsika voatazon-dRATSI – ny vatan’ny vahoaka efa trotraky ny fiainana, talohan’ireny…
Amin’izao dia mivandravandra
fa tsy hamela mora koa i France!
Ary ireto olona politika malaza ao Afrik’ê: rehefa tolorana dia traître, tena mpanolana (resaka) iraisam-pirenena
Ho tafa soa anie ny dia,
dia asiana réserve ny fifaneraserana @ ity farany
16 mai 2013 à 5 h 02 min
Ny zavatra misy sy tsy azo lavina aloha izao dia efa kandida I Neny. Tsy misy tokony na antony hanesorana izany tsy ho eo @ tantara. Aleo foana hoy aho ny tantara no hitsara ity Firenena ity fa loham-boto sy jiolahimboto no hanjaka eto dia ho boto koa no hiafarantsika. Raha olona mpanao toton’omby bory no hanjaka eto dia ho bory koa isika. Raha olona zatra manao lalam-be hitan-kisoa no hanjaka eto dia isika mianakavy no tsy hahita ny soa sy ny rariny ary hitsiny. Koa asakasak’izay hampanjaka ny boto sy bory fa raha ny sitrapon’ny vahoaka no tiana ho fantatra dia aleo hiverina @ mpitondra azy teo aloha ny fitondrana ny raharaha na rehefa tsy avela izy dia ny vadiny koa mbola vonona sy tapa-kevitra e!
Précédent Article précédent : Mpaminany fopla
Suivant Article suivant : Goaka ny atiny